Qeqesha ukunyakaza kwakho - Psychology 2022
Qeqesha ukunyakaza kwakho
Guqula i-negative ibe phozithivu
Hlanza imizwa ngomzimba
Bheka isimo sempendulo
Amantombazane amahle angaziphathi kanjalo! Abantu abanesizotha abakwenzi lokho! Sifundiswa ukulawula imizwa cishe kusukela ekuzalweni. Indlela yokubhekana nazo?
Umuntu uyisidalwa esingokomzwelo. Ngisho nokuzola kakhulu kungaqubuka ukuze kungabonakali kancane. Umntwana udonsa ukunaka kwabanye kumuntu wakhe ngemizwa yakhe. Kodwa abazali, othisha, othisha nabanye “abantu abanomusa” basifundisa usuku nosuku ukuze silawule imizwelo yethu. Ngakolunye uhlangothi, kunjalo: asizona izimpisi zokuziphonsa komunye nomunye. Ngakolunye uhlangothi, imizwelo eboshiwe igcwele impilo ebuthaka, ukucindezeleka, noma - okwenzeka kaningi - ukukhululwa kobudlova kulabo abangenacala kubo (izingane, abayeni, abazali).
Umuntu ngokwakhe angafunda ukulawula imizwelo yakhe. Ngokuvamile sibhekene nokusabela okubili ekushukumiseni: sizama ukushaya (ukumemeza) noma sizama ukufihla ekujuleni kwethu, okuholela kamuva ekucasukeni nasekuguleni. Kuyacekela phansi, akunjalo? Izazi zokusebenza kwengqondo zisinika ezinye izindlela.
Thina besifazane sivame ukusebenzisa esikhundleni esinjalo ngokungazi: “Mhlawumbe wazi izilimi ezimbili, kodwa mina ngibukeka ngingcono!”, “Umyeni wami makangabi umphathi, kodwa uyangithwala ezingalweni zakhe.” Kubantu besilisa, ingxabano ethi “kodwa” ayisebenzi, kodwa futhi ingahumusha imizwa engemihle ibe yinhle. Isibonelo, ukumoyizela ngenjabulo uzakwenu oqophisane naye, noma ukucabanga ngento enhle: iphromoshini yesikhathi esizayo, iholidi elizayo, idethi, usuku lokuphumula. Kusihlwa ukubuka i-movie eyintandokazi noma ukugeza okunephunga elimnandi, ukudla okumnandi kuzosiza abaningi.
Sonke siyayazi le ndlela, kodwa asivamile ukuyisebenzisa: udinga ukuphefumula ngokujulile futhi kancane, ushintshe uhlobo lomsebenzi: thatha uhambo, uhambe ngenkuthalo, uguqule ama-pedals ku-simulator (kwamanye amahhovisi afakwe ukuze abasebenzi phazamisekile). Labo abahlangana nenani elikhulu labantu ngesikhathi somsebenzi futhi bavezwe ekucindezelekeni (abathengisi, abalungisa izinwele, abaphathi) batuswa ukuba bazijwayeze ukudansa kanye ne-yoga. Isibhakela noma imithwalo yamandla ejimini izosiza abantu abakhuthele ukukhulula ulaka.
Okungukuthi, yenza i-hemisphere ephambene yobuchopho isebenze. Isibonelo, ungaqala ukuphindaphinda izinombolo ezinamadijithi amathathu kukholamu noma ubambe ngekhanda imishwana embalwa ngolimi lwangaphandle. Noma zama ukuqonda ngokunengqondo: “Ngithukuthele manje, kungani ngiwudinga lomzwelo? Phela ukucasuka kuphazamisa ukugxilisa ingqondo, ukuzwa lowo okhuluma naye bese uthatha isinqumo esifanele.
Kuyindlela yokuziphatha yokulawula imizwa. Konke kulula lapha: uma kunesimo esinzima ngaphambili, siqeqesha ekhaya. Sisebenzela ukukhuluma esidlangalaleni, izingxabano nomphathi noma ozakwethu, ukusabela ekuhlazweni kwezithuthi zomphakathi. Kuze kube yilapho "sibhala" umbhalo engqondweni yethu, sicabange ngezimpendulo ezingaba khona futhi sibambe ngekhanda imishwana embalwa ukuze sihlale sihlome ngokugcwele.
KUBALULEKILE! Prakthiza ukubonga. Futhi qala ngokuzivocavoca okulula: bhala amaphuzu ayi-100 "Ngiyabonga …" (umama, umyeni, izingane, imvelo, njll.). Khumbula imizwa ozobhala ngayo futhi uphinde ufunde uhlu, futhi lokhu kuvame ukumamatheka, injabulo. Gxila kulesi simo uma ubonga abanye. Into esemqoka ukuthi ube qotho futhi uzothola umthombo omusha wamandla ngokwakho.
Yini okufanele uyidle ngaphambi nangemva kokuzivocavoca kwakho ejimini?
Indlela yokulinganisa ukudla kwakho ngesikhathi esishisayo: imithetho emithathu ebalulekile
Ehlobo, kubaluleke kakhulu ukuqapha ukudla kwakho. Isazi sokudla okunempilo sitshele ukuthi ungakuqamba kanjani ukudla kwakho ehlobo ukuze ugweme ukuphelelwa amanzi emzimbeni futhi uzizwe ukhululekile
3 ukudla ongakwengeza ekudleni kwakho ukuthuthukisa inkumbulo
Ukudla okunomsoco kubalulekile ukuze ubuchopho busebenze kahle. Sikunikeza imikhiqizo ye-TOP-3 enomphumela omuhle ekusebenzeni kobuchopho futhi engathuthukisa inkumbulo
Ama-accents welineni ekugqokeni okungajwayelekile noma ukuthi ungangeza kanjani ukucwebezela ekubukeni kwakho?